Tag: endri-javatra mandady | Martech Zone
Tag: endri-javatra mandady
Kely = Bebe kokoa
Alarobia 10, 2005 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Te-hanaraka ny lahatsoratro Open = Growth aho nandritra ny fotoana kelikely. Voalaza ao anatin'io lahatsoratra io ny mety hahitana fahombiazana rehefa mifantoka amin'ny fomba fampidirana vahaolana miaraka amin'ireo vahaolana hafa ny olona. Misy lafiny hafa amin'izany, ary izany dia ny orinasa hametra ny fiasan'ny vahaolana arahin'izy ireo amin'ny votoatin'ny fampiasan'izy ireo. Mety hampidi-doza ny manampy be dia be amin'ny vokatra, serivisy ary endri-javatra. Miantso azy io ny mpandahatra programa